Finland: Soomaali argagixiso loo soo xiray | Somaliska
Booliska dalka Finland ayaa soo xiray gabadh iyo wiil Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay taageerayeen argagixiso. Ninkaan oo sanadkii 2005 soo galay Finland ayaa la sheegay in lacago badan uu u diray Xarakada Al-shabaab isla markaana uu hal qof ku qalqaaliyay in uu fuliyo weeraro argagixiso sida ay qortay wakaalada wararka ee Finland YLE.
Gabadha la soo xiray ayaa la sheegay in ay sanadkii 2008 timid Finland oo xiriir ka dhexeeyo iyada iyo ninka la soo xiray. Booliska ayaa sidoo kale booqday xawaalado Soomaalidu leedahay iyagoo la wareegay dokumentiyo iyo kombutaro.
Booliska ayaa sheegay in ay raadinayaan dad badan oo ku lugleh arintaan oo qaarkood ku nool yihiin dibada Finland.
Bilowgii bishaan ayay ahayd markii 4 nin oo 3 Soomaali yihiin lagu xiray magaalada Göteborg oo lagu eedeeyay in ay weerar argagixiso maleegayeen. Raggaan ayaa mid la siidaayay halka intii kale xabsiga ku jiraan oo aysan wali maxkamadi xukumin.
alahayoow adigaa somali u maqan ee u gargaar meelkastooy jooganba yaa raxmaan yaa khafuru xariim
Waa arin fiican oo qof walbo al shayaadiin taageera lakuso qabqabto mel wal ba ay joogaan kuwa aan waxay yihiin la,aqoonin.
waxaan yaa naga qabto, hada soomaali oo dhan far ayaa ku godan oo meel kasta ay joogaan isha ayaa lagu hayaa , !! Alloow hanuuni oo wadada saxda ah tusi umadaada !!
maryaan hand says:
alahayoow adigaa somali u maqan ee u gargaar yaa raxmaan walahy hadan somali,, nahay dhib ba ina heysata lkn wan ka bixidin insha allah ,,,,,,,,…………<3